Umphakathi ugxeka umasipala ngokuhluleka ukwenza umsebenzi | News24
Umphakathi ugxeka umasipala ngokuhluleka ukwenza umsebenzi
isithombr: lethiwe makhanyaAmalunga omphakathi ngesikhathi kunembizo eCaluza.
UMPHAKATHI ophuma emawadini ahlukene ngaphansi komasipala uMsunduzi uvuke umbhejazane ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-12 kuMbasa (April) wazwakalisa ukungenami kwawo ngokusebenza komasipala uMsunduzi.
Lamalunga omphakathi abeyingxenye yembizo ebeyibizwe uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana kanye nezindaba zoMdabu uNkk Nomusa Dube Ncube nalapho kade ezokwazisa khona umphakathi ngokuthi kuzokwezekalani njengoba umasipala uMsunduzi usufakwe ngaphansi kwehlo lomlawuli.
Le mbizo ibise hholo lomphakathi eCaluza.
UDube -Ncube uthe bathathe isinqubo sokuba bafake lomasipala ngaphansi kweso lomlawuli ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo :
•Amakhansela abengasayihambeli nhlobo imihlangano ebalulekile nokugcine sekuphendula umasipala indawo engukwampunzi edla emini.
•Ukuhluleka komasipala ukujezisa labo abebethinteka ekusetshenzisweni kwemali yabakhokhi bentela ngendlela engafanele.
•Ukuhluleka ukubheka ukusebenza kwezikhulu njengoba lokhu kuholele ekutheni umasipala uphucwe izigidi ngezigidi zemali zokuthuthukiswa komphakathi ngenxa yokuhluleka kwawo ukuyisebenzisa ngendlela efanele.
•Ukuhluleka ukuxazulula izingqinamba umphakathi obhekene nazo njengoba idolobha laseMsunduzi laziwa njengelingcole kunawo wonke.
•Ukuhluleka ukuphenya izinsolo zenkohlakalo kuwona lomasipala.
Ekhuluma namalunga omphakathi uNkk Dube-Ncube uthe izikhalo zomphakathi uzozidlulisela eminyangweni efanelekile ukuze leyominyango izokwazi ukuthi ibuye izoletha lezo zimpendulo.
“Ohlelweni lokuthi umasipala waseMsunduzi nezindawo zasemalokishini nasemadolobheni kubalulekile abantu baphile bahlale endaweni ehlanzekile manje kungcolile kanti futhi awuqoqwa udoti nemisebenzi ayenzeki ngendlela efanele.
“Siwutshelile umasipala kanye namakhansela ukuthi siyathemba ukuthi angeke baze babavikele abasebenzi abangasebenzi okanye abangafuni ukusebenza uma ngabe kufanelwe bajezizwe.
“Uma ngabe uqashelwe ukwenza umsebenzi bese wena ungawenzi loko kusho ukuthi wena uthola imali ngenkohlakalo,” kubeka yena.
Uthe bakhulumile nomasipala ukuthi uma kungabe kukhona abasebenzi ekumele bashushiswe kanye nabantu ekumele baboshwe kumele ukuthi kusetshenziswane ukuze kulungiswe umasipala uMsunduzi kanye nezinto ezonakele ezitholakala emphakathini.
“Siyathemba ukuthi nomphakathi uzobambisana nomasipala kanye nomnyango kanye nabalawuli. Asilethanga umlawuli oyedwa kodwa silethe ithimba elizosebenza nabasebenzi bakamasipala kulungiswe lapho kwenzeke amaphutha. Kuphindwe kwenziwe loko ekumele kwenziwe ngezimali ukuthi zenze imisebenzi eyahlukahlukene,” kubeka yena.
Amalunga omphakathi abevutha bhe ethi akhathele umasipala ongabenzeli lutho njengoba bethi basenenkinga yokuthola intuthuko ezindaweni abahlala kuzona.
UNks Phumla Luthuli waka ward-39 uthe : “Kunezindawo ezinomgwaqo ogalungile umphakathi uyazilungisela. Asikho esigculiseke ngako ngoba nezimoto ezithwala amanzi akafiki.
“Izindlu esathanjiswa zona kuze kube imanje asikaze sizithole,” kubeka yena,
UNks Khuthaza Makoya ka-ward 2 uthe: “Sinenkinga yokuthi bafika bagugule umgwaqo baqhumise amapayipi uma sibuza bathi abangene bona. Umgwaqo waseShayabantu wagugulwa ngo-2012 kodwa kuze kube imanje awakhiwe.”
UNtombikhona waka-ward 8 uthe bona banenkinga yokuthi ikhansela abalazi imigwaqo yonakele kanti futhi namanzi abanawo.